ပျိုမေတို့ သိထားဖို့လိုတဲ့ ဗီတာမင်စီ Skin Products များအကြောင်း - Lifestyle Myanmar
Home Health & Beauty ပျိုမေတို့ သိထားဖို့လိုတဲ့ ဗီတာမင်စီ Skin Products များအကြောင်း
ပျိုမေတို့ သိထားဖို့လိုတဲ့ ဗီတာမင်စီ Skin Products များအကြောင်း
ကျွန်မတို့ အသားအရေကျန်းမာမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်တဲ့ လိုးရှင်းတွေ၊ ခရမ်တွေနဲ့ ဆီရမ်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ skin product တွေအားလုံးထဲမှာမှ ဗီတာမင်စီ lotions ကို အရေပြားအလှအပကျွမ်းကျင်သူများက အများဆုံး အကြံပြုကြပါတယ်။ ဗီတာမင်စီဟာ ကျွန်မတို့အသားအရေရဲ့ အစိုဓါတ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့အပြင် အရေပြားကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးကျေးဇူးအများကြီး ပေးလို့ပါပဲ။
အက်စ်ကောဘစ်အက်ဆစ်ကို အများအားဖြင့် ဗီတာမင်စီလို့ သိကြပါတယ်။ ဒါက ခန္ဓာကိုယ်ပုံမှန်လည်ပတ်ဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ပစ္စည်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ပျော်ဝင်-ဟိုက်ဒရို ဗီတာမင်ဟာ metabolizing ဂလူးကိုစ့် မှလာပြီး ကျန်းမာတဲ့အသားအရေအတွက် မရှိမဖြစ်ပါပဲ။ ၎င်းဟာ ပရိုတိန်း၊ lipids နဲ့ ကော်လာဂျင်ကို ဖန်တီးခြင်းမှာ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ အသားအရေကို elastic ဖြစ်ပြီး ကျန်းမာချောမွေ့စေဖို့ လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင် E ကိုလည်း ဖန်တီးပေးပါတယ်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အက်စ်ကောဘစ်အက်ဆစ်ကို မထုတ်လုပ်နိုင်သလို တာရှည် သိမ်းဆည်းထားလို့ မရပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဒီဗီတာမင်ကို အစားအစာ၊ ဖြည့်စွက်စာ သို့မဟုတ် လိုးရှင်းများမှတဆင့် ရယူရပါတယ်။
ဗီတာမင်စီက အရေပြားအတွက် ဘာ့ကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ?
အက်စ်ကောဘစ်အက်ဆစ်ရဲ့ အင်တီအောက်ဆီဒင့်တစ်ခုအဖြစ် Solar radiation ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ အရွယ်မတိုင်မီအိုမင်းခြင်းကနေ အသားအရေကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ သင်ဟာ အက်စ်ကောဘစ်အက်ဆစ်(ဗီတာမင် C) အလုံအလောက်ပါတဲ့ လိုးရှင်းကိုသုံးရင် သင့်အသားအရေအပြင်အလွှာကို ဒီအင်တီအောက်ဆီဒင့် အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့အရေပြားဆဲလ်တွေပေါ်မှာ free radicals သက်ရောက်မှုတွေကို တားဆီးပေးတာကြောင့် အစောပိုင်းအိုမင်းခြင်းလက္ခဏာများကို လျော့ချပေးပါတယ်။
အရေပြား အစက်အပြောက်များ၊ အရေးအကြောင်းများကို တားဆီးပေးပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဗီတာမင်စီဟာ ကော်လာဂျင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ element တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဗီတာမင်ဟာ အရေပြားကို တောက်ပစေပါတယ်။ အက်စ်ကောဘစ်အက်ဆစ်(ဗီတာမင်C)ဟာ အနည်းဆုံး ၅%ပါဝင်တဲ့ skin products များအတွက် အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။
ဗီတာမင်စီပါဝင်တဲ့ လိုးရှင်းတွေဟာ အသားအရေကို တောက်ပစေပြီး အစက်အပြောက်တွေ၊ အရေးအကြောင်းတွေကို လျော့ချပေးပါတယ်။
ဗီတာမင်စီ ပါဝင်တဲ့ ဆီရမ်များဟာ hydration ကိုအများဆုံးပေးနိုင်တာကြောင့် အိုမင်းခြင်းလက္ခဏာတွေကို လျော့ချတားဆီးပေးပါတယ်။
ဒီအလှကုန်များဟာ လူလတ်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ကော်လာဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကို လှုံ့ဆော်ဖို့ အဓိအားဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ပြိုမတေို့ သိထားဖို့လိုတဲ့ ဗီတာမငျစီ Skin Products မြားအကွောငျး
ကြှနျမတို့ အသားအရကေနျြးမာမှုကို ထိနျးသိမျးပေးနိုငျတဲ့ လိုးရှငျးတှေ၊ ခရမျတှနေဲ့ ဆီရမျတှေ အမြားကွီး ရှိပါတယျ။ အဲ့ဒီ skin product တှအေားလုံးထဲမှာမှ ဗီတာမငျစီ lotions ကို အရပွေားအလှအပကြှမျးကငျြသူမြားက အမြားဆုံး အကွံပွုကွပါတယျ။ ဗီတာမငျစီဟာ ကြှနျမတို့အသားအရရေဲ့ အစိုဓါတျကို ထိနျးသိမျးပေးတဲ့အပွငျ အရပွေားကနျြးမာရေးအတှကျ အကြိုးကြေးဇူးအမြားကွီး ပေးလို့ပါပဲ။
အကျဈကောဘဈအကျဆဈကို အမြားအားဖွငျ့ ဗီတာမငျစီလို့ သိကွပါတယျ။ ဒါက ခန်ဓာကိုယျပုံမှနျလညျပတျဖို့အတှကျ မရှိမဖွဈလိုအပျသော ပစ်စညျး တဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒီ ပြျောဝငျ-ဟိုကျဒရို ဗီတာမငျဟာ metabolizing ဂလူးကိုဈ့ မှလာပွီး ကနျြးမာတဲ့အသားအရအေတှကျ မရှိမဖွဈပါပဲ။ ၎င်းငျးဟာ ပရိုတိနျး၊ lipids နဲ့ ကျောလာဂငျြကို ဖနျတီးခွငျးမှာ အရေးပါတဲ့ အခနျးကဏ်ဍက ပါဝငျပါတယျ။ ကြှနျမတို့ အသားအရကေို elastic ဖွဈပွီး ကနျြးမာခြောမှစေ့ဖေို့ လိုအပျတဲ့ ဗီတာမငျ E ကိုလညျး ဖနျတီးပေးပါတယျ။ လူ့ခန်ဓာကိုယျဟာ အကျဈကောဘဈအကျဆဈကို မထုတျလုပျနိုငျသလို တာရှညျ သိမျးဆညျးထားလို့ မရပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ ဒီဗီတာမငျကို အစားအစာ၊ ဖွညျ့စှကျစာ သို့မဟုတျ လိုးရှငျးမြားမှတဆငျ့ ရယူရပါတယျ။
ဗီတာမငျစီက အရပွေားအတှကျ ဘာ့ကွောငျ့အရေးကွီးတာလဲ?
အကျဈကောဘဈအကျဆဈရဲ့ အငျတီအောကျဆီဒငျ့တဈခုအဖွဈ Solar radiation ကွောငျ့ဖွဈပျေါတဲ့ အရှယျမတိုငျမီအိုမငျးခွငျးကနေ အသားအရကေို ကာကှယျပေးပါတယျ။ သငျဟာ အကျဈကောဘဈအကျဆဈ(ဗီတာမငျ C) အလုံအလောကျပါတဲ့ လိုးရှငျးကိုသုံးရငျ သငျ့အသားအရအေပွငျအလှာကို ဒီအငျတီအောကျဆီဒငျ့ အကြိုးကြေးဇူးတှေ ရရှိနိုငျပါတယျ။
ကြှနျမတို့အရပွေားဆဲလျတှပေျေါမှာ free radicals သကျရောကျမှုတှကေို တားဆီးပေးတာကွောငျ့ အစောပိုငျးအိုမငျးခွငျးလက်ခဏာမြားကို လြော့ခပြေးပါတယျ။
အရပွေား အစကျအပွောကျမြား၊ အရေးအကွောငျးမြားကို တားဆီးပေးပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဗီတာမငျစီဟာ ကျောလာဂငျြထုတျလုပျမှုအတှကျ မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့ element တဈခုလညျးဖွဈပါတယျ။
ဒီဗီတာမငျဟာ အရပွေားကို တောကျပစပေါတယျ။ အကျဈကောဘဈအကျဆဈ(ဗီတာမငျC)ဟာ အနညျးဆုံး ၅%ပါဝငျတဲ့ skin products မြားအတှကျ အဓိကပါဝငျပစ်စညျးတဈခုဖွဈလာပါတယျ။
ဗီတာမငျစီပါဝငျတဲ့ လိုးရှငျးတှဟော အသားအရကေို တောကျပစပွေီး အစကျအပွောကျတှေ၊ အရေးအကွောငျးတှကေို လြော့ခပြေးပါတယျ။
ဗီတာမငျစီ ပါဝငျတဲ့ ဆီရမျမြားဟာ hydration ကိုအမြားဆုံးပေးနိုငျတာကွောငျ့ အိုမငျးခွငျးလက်ခဏာတှကေို လြော့ခတြားဆီးပေးပါတယျ။
ဒီအလှကုနျမြားဟာ လူလတျပိုငျးရောကျလာတဲ့အခါ မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့ ကျောလာဂငျြထုတျလုပျမှုကို လှုံ့ဆျောဖို့ အဓိအားဖွငျ့ အလုပျလုပျပါတယျ။
Previous articleမိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ထဲမှာ ပြန်အပူပေးပြီး မစားသင့်တဲ့ အစားအစာ (၅)မျိုး
Next articleအိမ်မှာ ကိုယ့်ဘာသာအလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်မယ့် လက်သည်းဒီဇိုင်းလေးတွေ